OPDOn Lafa Gurguratte ODPn Biyyaa Oromoo Gurguratti! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOPDOn Lafa Gurguratte ODPn Biyyaa Oromoo Gurguratti!
Damee Boruutin, Bitootessa 26, 2019
Yaa Qeerroo fi yaa Qarree Orommo yaroo OPDOn gabaa baaftee isin gurgurtu tole jettanii ilaaltuu? Utuu OPDOn dhugaa jijjirama kana dhiiga keessanitu fide jettee kan fudhatu tahee gaaffii dhiigni keenya itti dhangalafnee fi qaroon ilmaan Oromoo kumaatamni itti araarsa tahe keessa kamitu nuuf deebi’ee jiraa? Abbaa biyyummaa keenya argannee? Hiree keeny ofiin murteefachuuf haqni qabnu nuuf mirkanaa’ee? Qabeenya keenya irratti abboomuu dandeenyee jirraa? Afaan keenya Afaan federaalaa nuuf haa tahu yaroo jennu Afaan Amhaaraa Afaan Afrikaa haa tahu jechuun isaa dhufaa? Namni kun eenyyuuf akka dhaabbatee fi akka hojjetu nuuf hin galuu? Ykn akkuma jedhan nuyi gowwaa dhaa? Kan abbaan fedhe gara barbaadetti nu oofu dha? Nuyi kaayyoo fi akeeka hin qabnu? Daballoota OPDO bitamtee nu sobdu dhaga’uu dhaabuu hin qabnuu?
Waan OPDOn nu sobaa fi sosobaan jirtuun amma yoom dhiigni uummata keenyaa dhangalaa’aa jiraataa? Har’a maqaa ODPn OPDOn nan jijjirame jettee lafa Oromoo gurguruun xiqqaatee biyya Oromoo ija keenya duratti gurgurachaa jirti. Amhaarri magaalota Oromiyaa kan kooti jedhee dhaadachuu irra darbee ilmaan Oromoo magala kanaa bahaa badaa jechaa jira. Kana malee mootummaa mataa isaa magaala Oromiyyaa akka Finfinnee keessatti ijaaratee miidhaa guddaa qabeenya ilmaan Oromoo fi lubbuu namaa irraan gahaa jira. Magaalota biraa keesattis deemanii ijaarachuuf dhaadachaa jiru. Uummatni Oromoo nagaan bahee galuuf yaaddoo guddaa keessa jira.Kan keenya eegaa maal jedhamaa? sodaa immoo obsa?
Har’a Muumichi ministeeraa karaa mirga isaa Alemuu Simee karaa bitaa Damaqee Mokonnon prezedantii ADP jidhuu dhaabatee Uummatni Oromoo wal qixxumman uummata biraa wajjin wal jaalatee akka jiraachaa ture dubbata. Of sobuun bareedaa dha. Qeerroo fi Qarree waamee qabsoo isin fidan kanan uummatni keenya bilisoomee gara fuula duraa tarkaanfachaa jira jechuun kijiba. OPDOn yaroo uummata keenya gabaa baaftee gurguruu barbaadu uummatni gaariin akka Oromoo hin jiru jetti. Achi galagaltee uummata keenya lafa isaa wajjin gurgurachaa akka jirtu immoo ni agarra. Har’a biyya Oromoo guututun gurguramaa jira. Akka kaleessaa qotee bulaa naannoo Finfinnee duwwaa miti kan buqqa’aa jiru. Ummatni Oromoo Kibaa, Kabaa, Bahaa fi Dhihaa buqaa’aa jira. Eeenyyu bakka Uummatni Oromoo irraa buqqa’u akka qubataa jiru wal nama hin gaafachiisu. Amhaarri qophaa’ee hidhatee ofii isaa iyyuu uuummata keenyatti bobba’ee buqqisuu jalqabee jira. Jidduu kana Karrayuu keessatti kan tahaa jiru namni quba hin qabne yoo jiraate hidhataan Amhaaraa Oromoota lafa irraa dugugaa jiru.
Amhaarri hidhachuun aadaa isaa waan taheef wal gahii irraa illee yaroo qawween nama ari’u kan itti dubbatu hin jiru. Ilmaan Oromoo haqa saba isaanii kabachiisu jecha ija mukaa nyaatanii dagala mana godhatan warra qabsoo haqaaf godhan madaafaa fi madhifiin gahuu didee OPDOn xiyaaran gubaa jirti. Biyya lafaa irratti bineensa adamsuunuu bara heeraa f seera qabu kana OPDOn ilmaan Oromoo akka bineesaa adamsaa, hidhaa fi ajjeessaa jirti. Ajjeechaan waggaa digdamii sadetti garaa waan isaan hin geenyeef bara kana ajjechaa isa o’aa keessa jiru. Namni dhiiga nama dhuguu baree amma fedhe iyyuu yoo ajjeesse garaa isa hin gahu. Caalaa iyyuu dabalee ajjeessuu barbaada. Warri isaan ajjeessan halkan abjuun waan itti dhufanii warra isaan fakkaatu hundaa ajjeessanii lafa irraa fixxuun waan hiikaa tahuuf itti fakkaata.
Jawaar Mohammed ergamtuun OPDO tokkoffaan namni balaafattu Alemuu Simee harka mirgaa Muumicha Ministeeraa bukkee yaroo dhaabbatu arguun ammam ODPn akka OPDO gadi taate agarsiisa. ODPn nu ceesisaa jedhee warri eegatu warra abjuun dhadhaa dhugaa bulu qofa. ODPn namaa fi biyya ceesisuu miti ofii ishee iyyuu ce’aa hin jiru. Utuu isa gamaa fi gamana jiru walitti araarsuuf jidduu deemtu kan dura qilee bu’u ishee dha. Qeerroo fi Qarreen Oromoo warra seenaa nyaatu utuu hin taane warra seenaa hojjetu.
WBOn har’a ODPn adamsamaa jirtu Qeerroo f Qarree waggaa shanan darban qabsoo bilisummaa fininsaa turan akka tahe dagatamuu hin qabu. Akka OPDOn ololtu waraanni kun kan ijaarsa nama tokko utuu hin kan uummata Oromoo bal’aa ti. Bakka har’a lolli guddaan itti deema jiru naannoo adda addaa haa tahu malee ilmaan Oromoo naannoo hundaatu keessa jira. Hammeenyi OPDOn naannoo tokko tokkotti gochaa jirtu dhiyeenyatti bakka hundaa akka qaqqabu mamuu hin qabnu.Kanaafuu irree tokkoon kaanee of irraa darbuu qofatu filmaata dha.
Miseesota WBO warra Abbootii Gadaa fi Uummata Oromoo ammanee gale OPDOn mana hidhaa galchitee hiraarsaa fi haamilee isaanii cabsitee akka maraatan gochaa jirti. Kana malee busaa fi dhukkuba adda addaaf saaxilamanii akka dhumanii gammoojjii keessatti hidhaman jiru. Gochi kun seera jalataa kan mirga dhala nama wajjin wal mormu tahuu isaa caala ammam OPDOn akka gadi galtuu taate agrsiisa. Ijoollee kana lolan hin moone. Soban moote. Akka jecha miseensa Koree Tekinkii nama turee Obbo Baqalaa Garba jedhuu yoo tahe nama 827 galshuuf mootummaan kun lola waggaa sadetii amma waggaa kudhanii isa fudhatu danda’u bararree jirra jedha. Inni illee hojii isaa kana akka waan gaarii godheetti himata. Garuu hojii fokkisaa, abaramaa fi yakkamaa guyyaa tokko isa gaafachiisu akka tahe dagachuu hin qabu. Mootummaan OPDO sobduu akka taate utuu beeku maaliif ilmaan Oromoo sobee hidhaatti galchuun barbaachisaa tahe? yoo innis bitamtuu fi ergamtuu OPDO hin taane? Guyyaa tokko hunduu kan hojii isaa ni argata.Yoo nama biratti utuu seeraaf hin dhiyaatiin hafe seera Waaqaaa jalaa namni milquu danda’u hin jiru. Hundaaf akka hojii isaa!
Saamichi lafa Oromoo daangaa haa godhatu! Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 6,2019 Waggoottan 150 oliif erga…